भासियो नारायणगढ-मुग्लिन सडक – ainapati
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार /
भासियो नारायणगढ-मुग्लिन सडक
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको १७ किलोमा सडक थप भासिएपछि सवारी साधन एकतर्फि सञ्चालन गरिएको छ । आज बिहान भासिएको सो ठाउँमा ग्राबेल हालेर दुईतर्फी यातयात सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ ।
उनले १७ किलोमा तीनदेखि ३ दशमलब ५ मिटर फराकिलो ३५ मिटर लामो क्षेत्रमा एक फिटजति सडक भासिएको बताए। सो ठाउँमा सडक नौ मिटर फराकिलो छ । सडक ग्राबेलिङ गरेपछि दुईतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
सो ठाउँमा विसं २०६० मा सडकमुनिबाट एङ्कर वाल दिएर निर्माण गरिएको थियो । यसैमा समस्या आएको जनाइएको छ । सो क्षेत्रमा तलबाट त्रिशूली नदीले काटेका कारण एङ्कर वालले काम गर्न छाडेको हो।
दुई वर्षअघि सो सडक विस्तारको काम गरिएको हो । सडक निर्माण गरिएको एक वर्ष नपुग्दै सो ठाउँ र २६ किलोमा ६ दशमलव ५ मिटर फराकिलो सडक ७० मिटर लामो भाग भासिएको छ । ती दुवै ठाउँमा मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि बोलपत्र नपरेको सडक विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले मर्मतका लागि दुईपटक बोलपत्र आह्वान गर्दासमेत कोही पनि नआएको बताए। प्राविधिकरुपमा दक्ष भएको ठेकेदार कम्पनीले मात्र काम गर्नसक्ने भएकाले जो कोहीले आँट नगरेको बुझिएको छ।
ठेक्का नपरेपछि यस वर्षको वर्षात्मा पनि यत्तिकै सडक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हो । भासिएको क्षेत्र बढेमा वर्षात्को समयमा समस्या आउनसक्ने अनुमान गरिरहेका बेला सो ठाउँमा सडक थप भासिएको हो ।
यस सडक राजधानी भित्रने र बाहिरिने प्रमुख मार्ग हो। सडकमा दैनिक १० हजार सवारीसाधन आवागमन गर्ने गर्दछन्।
गीतकार अम्बिका गुरुङको ''कति माया'' सार्वजनिक
साझा बस साउन १ देखि चल्ने
मोडल कमल कमल सिंहको अभिनय रहेको तिन फरक फरक गीतको भिडियो सार्बजनिक
गायक झोटन मेहताको संगीतमा रमेश प्रसाईले मगही भाषाको गीत रेकर्ड गरे
मोडल सुस्मिता खड्काको अभिनयमा रहेको ”प्राप्ति र पिडा” सार्वजनिक
शिशिर बुढाथोकीद्वारा निर्देसित ” गोठमा माली गाई” सार्वजनिक
महिला हस्तकला मेला ललितपुर महानगपालिकाको प्रांङ्गणमा सुरु
नारायणगढ-मुग्लिन सडक भोलीदेखी दिनको ४ घन्टा बन्द
यस्तो छ सरकार र ‘विप्लव’ नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति
सहमतिभित्र महान् आकांक्षा लुकेको छ: विप्लव
गायिका रचना रिमालको ‘सुनन पियारी’ सार्वजनिक
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ऐनापाटी डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ऐना मिडिया हाउस प्रा. लि. का सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता न. १९ /०७६-७७
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं : २९९९/०७६/७७
संचालक : दिपेन्द्र थिङ
सम्पादक: भविन्द्र राई
ठेगाना: ललितपुर,२५ भैसेँपाटी
संपर्क नम्बर : ९८६७१८९६५६
विप्लव काठमाडौं प्रवेश, प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सिधै वालुवाटार
नवलपरासीमा सार्वजनिक भए ‘विप्लव’
© २०१९ ऐनपाटीद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित / प्रकाशित मिति २०७६ / असोज १५ powered by : sastosite.com, 9847497906